I-Semalt Ichaza Amathuluzi Okukhulu Ukukhipha Imibhalo Kusuka Ema-HTML Amadokhumenti
Umbhalo kumadokhumenti we-HTML uhlobo oluthile lokuqukethwe okubekwe phakathi kwehlukile Amathegi we-HTML ( ,,,). Kunezinhlelo ezihlukahlukene ezinzulu nezinamandla ezingasiza ukuvuna zonke izinhlobo zedatha, kufaka phakathi imibhalo, izithombe, kanye nezixhumanisi. Ngaphandle kwalokho, noma iyiphi idatha ekhishwe ingashintshwa ibe ifomethi ehlelekile futhi yomsebenzisi - curso rapido de fotografia reflex. Ngaphezu kwalokho, akudingeki ufunde noma yimaphi amakhodi, ngoba la mathuluzi afanele kunoma ubani ongenalo ikhono lokubhala noma isipiliyoni.
I-Import.io ingenye yamathuluzi ahamba phambili, athandwa kakhulu futhi awusizo angasebenza kumodi ye-Magic. Ithuluzi liyathandwa kakhulu ngenxa yesikhombikubona sayo somsebenzisi-friendly. Ukusebenzisa i-Import.io, ungabonisa i-URL, futhi uhlelo luzokwazisa bese lukwazisa ulwazi. Iveza okuqukethwe ngesimo setafula futhi iza nezinketho eziningi zokulayisha kuqala. Idatha ingalandwa ngesimo se-JSON noma ingagcinwa ngqo kwi-hard disk yakho.
I-Extracts i-Octopus iqoqa zonke izinhlobo zedatha, iyilungisa ngendlela ehlelekile futhi ikusiza ukuthi uhlukanise phakathi kwedatha engakhiwe futhi ehlelekile. Udinga nje ukutshela lolu hlelo okufanele ukwenze nokuthi ungakhipha kanjani idatha kokubili nokujula nokubanzi. Iqoqa idatha yombhalo eyakhiwe ngezintambo. Lolu hlelo alusekeli amafayela wombhalo, amavidiyo, iziqeshana zomsindo, nezithombe.
Nge-Uipath, kulula ukuzenzakalela ifomu lokugcwalisa, ukuhamba, nokuchofoza izinkinobho. Kuyinto ekhangayo, esheshayo, elula futhi eguquguqukayo yocwecwe yewebhu esiza ukuvuna ulwazi oluwusizo kumadokhumenti e-HTML.
4. uKimono: (i-HTML, i-JSON, ne-Silverlight.) Ngaphezu kwalokho, ungaqeqesha lolu hlelo ukuze lulandise izenzo zomuntu ngezinkinga ezihlukahlukene. 16)
I-Kimono isebenza nge-scraping newsfeed kanye namanani. Lokhu kuyithuluzi elinembile nelithuthukisiwe lokukhipha umbhalo kumadokhumenti e-HTML. Ngokuvamile, uKimono angadonsa amafomu ehlukene ahlukene.
5. Isikrini sesikrini:
Isikrini se-Screen Scraper yinye ithuluzi lokusebenzisa idatha eliwusizo, linganikeza idatha ehlanzekile nehlanzekile, kanye nokubhekana nezinkinga ezihlobene nokuhlelwa kwedatha. Noma kunjalo, kudinga amanye amakhono okuhlela ukusebenza kahle. i-pricey encane, futhi inguqulo yayo yamahhala iza nenani elilinganiselwe lezinketho nezici.
6. Isikrini :
I-Scrapy ingenye yezinhlayiya ezinamandla kunazo zonke, ezisezingeni eliphezulu futhi ezimangalisayo zokukhahlela kwewebhu kanye nezinhlaka zokukhishwa kwedatha. It isetshenziselwa ukukhwabanisa amasayithi amaningi futhi ingakwazi ukukhipha idatha ehlelekile futhi engakhiwe ngezidingo zakho. Isiza ukuqapha nokuzenzekelayo izinga lemininingwane, ukuqinisekisa ukuthi uthole imiphumela engcono kakhulu yebhizinisi lakho le-intanethi.
7. I-Scraper Wiki:
Njengamanye amahlelo afanayo, i-Scraper Wiki iza nezinketho eziningi. Awudingi amakhono okubhala amakhodi ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu kuloluhlelo. Ungakwazi ukukhipha kuphela amakhasi ewebhu ajwayelekile kodwa futhi i-Wikipedia yonke usebenzisa i-Scraper Wiki. Isekela i-PHP, i-Python, ne-Ruby.
Ngethemba ukuthi uthole okuthile okufanele kulolu hlu, futhi sincoma ukuthi wabelane ngalawa mathuluzi amnandi nabangani bakho.